အောက်စီဂျင် တိုင်းနေသင့်။ နည်းရင်တော့ ဆေးရုံတက်ရ။ ၈၀% ဆေးရုံတက်ရန်မလိုကြ။
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ ညနေကြ (ကျ) ရင်တော့ကွာရန်တင်းဝင်ရမယ် သူတို့လာခေါ်မယ်ပြောပါတယ်။
COVID-19 ရောဂါအတွက် ဆေးကုသနည်း ဆေးသုတေသနတွေ တကမ္ဘာလုံးမှာလုပ်နေတယ်။ ပိုပြီး ကောင်းလာတယ်။ အရင်နည်းတချို့ကို မသုံးတော့ပါ၊ ဥပမာ အေမရိကန် အရင်သမတက ငှက်ဖျားဆေး။
၉-၁၀-၂၀၂ဝနေ့ထွက် ဆေးနည်း တချို့ရှိတယ်။
• Remdesivir ခေါ် ဗိုင်းရပ်စ်ဆေး။
• Dexamethasone ခေါ် ကော်တီကိုစတီရွိုက်ဆေး။
• Monoclonal antibodies အင်တီဘော်ဒီဆေး။
• Convalescent Plasma ပလာစမာ သွင်းပေးနည်း။
• Mesenchymal Stem Cells စတမ်ဆဲလ် ကုသနည်း။
1. အိမ်မှာသာ နေထိုင်ပါ။
2. တဦးတည်း တခန်းထဲမှာသာ နေပါ။
3. တခြားလူတွေနဲ့ ထိစပ်မှု မလုပ်ပါနဲ့။
4. စားလိုတာ အကုန်စားသောက်ပါ။
5. စိတ်ကို အပြုသဘောဆောင်ပါ။
• စစ်လို့ (+) ပြသူတွေ နောက် ၁၀ ရက်အထိသာကူးစက်နိုင်တယ်။
• နောက်ခုက သာမန်လက္ခဏာစတင်ခံစားရပြီးနောက် ၁၀ ရက်။
• နောက်တခုက ဆိုးတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေ စတင်ခံစားရပြီးနောက် ၂၀ ရက်။
• နောက်တခုက လက္ခဏာပျောက်ပြီးနောက် ၁၀ ရက်။
• လေ့လာမှုတခုက ၉ ရက်ဆိုပါတယ်။
ကူးစက်ခံရသူ ၈၀% က အလိုလို ကောင်းသွားတယ်။ ဘာဆေး ဘာအစားအစာတွေကမှ ပိုမကောင်းစေနိုင်။ ပိုမဆိုးစေ နိုင်။ စားလိုတာ စားပါ။
အောက်စီဂျင်လယ်ဘယ် တိုင်းရမယ်။ Pulse Oximeter အောက်စီမီတာနဲ့စမ်းတယ်။ သွေးထဲမှာရှိတဲ့ အောက်စီဂျင်။ SpO2 100% ကနေ 96% က အကောင်းဆုံး။ 90 to 92% အနည်းဆုံး။ 95 ထက်နည်းရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ 92% ဆိုရင် အရေးပေါ်သွားပါ။
Home Quarantine & Home Isolation အိမ်မှာသာ နေထိုင်းခြင်း စည်းမျဉ်း
• Stay at home အိမ်မှာသာနေပါ
ယူအက်စ်အေ တချို့ပြည်နယ်တွေမှာ Shelter-in-place အစီအစဉ် အမိန့်ထုတ်ထားတယ်။ မလုပ်မဖြစ်တာကလွဲရင် မလုပ်ပါနဲ့။ မလုပ်မဖြစ် စီးပွးရေး၊ မလုပ်မဖြစ် အလုပ်အကိုင်၊ မလုပ်မဖြစ် အစိုးရတာဝန်။ မိသားစုအတွက် ဆေးရရှိမှု၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်းသွားရခြင်း၊ မိသားစုသုံး မရှိမဖြစ် အရာများရယူခြင်း၊ ဘဏ်အလုပ်၊ စာတိုက်အလုပ်၊ ဓါတ်ဆီဖြည့်ခြင်း။ အဝတ်လျှော်ရခြင်း။ အနီးအနားလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်း၊ အပြင်ထွက်ရတိုင်း တခြားလူတွေနဲ့ ၆ ပေအကွာမှာသာရှိပါစေ။ တခြားမှာနေကြတဲ့ မိသားစုတွေကို စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း။ နာမကျန်း အိုမင်းမစွမ်းသူတွေကို စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း။ အီးလန်းနင်း ခေါ် ဂူဂယ်လ်ကလပ်စ်ရုမ်း ခေါ် အွန်လိုင်း သင်ယူခြင်း သင်ကြားပေးခြင်း။
• Social Distancing လူတွေနဲ့ ဝေးဝေးနေပါ
အိမ်ပြင်ထွက်ရရင် လမ်းညွှန်ချက်မှာ လူတယောက်နဲ့ တယောက် ၆ ပေအကွာ။ သာရေး နာရေး လူမှုရေးပွဲတွေ ရှောင်ပါ။ ဘုရားပွဲ နတ်ပွဲ ရာသီပွဲတွေ ရှောင်ပါ။ ရုပ်ရှင် ပွဲလမ်းသဘင်တွေ ရှောင်ပါ။ အားကစားပွဲတွေ ရှောင်ပါ။ ဟောပြောပွဲတွေ ရှောင်ပါ။ အလှူ၊ မင်္ဂလာဆောင် မွေးနေ့ ဘာနေ့ ညာနေ့။
လူဘယ်လောက်များတာကို လူစုလူဝေးခေါ်မလဲ။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဆိုချက်တွေ မတူပါ။ လူ ၅၀၀၀၊ ၁၀၀၀၊ ၅၀၊ ၁၀ ယောက်။ တကယ်တော့ တယောက်ထက်ပိုရင် ဗဟုဝုဒ်။ မိသားတစုတည်း။ အိမ်ခန်းတခန်းတည်း။ လင်မယားနှစ်ယောက်တည်း။ ဧကစာရီ တယောက်တည်း။
စျေးသွားဝယ်တာ မဝယ်မဖြစ်မှသာ သွားလာပါ။ ကြိုတင် ဝယ်ယူစုဆောင်းထားပါ။ အလုပ်ရုံ၊ ရုံး၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေ သွားလာတာကို လျော့သင့်၊ ပိတ်သင့်တဲ့အချိန် ရှိလာပါမယ်။
အိမ်မှာနေထိုင်ရင်း အကျိုးဖြစ်စေမှာတွေကို တီထွင်ကြံဆ လုပ်နေသင့်ကြတယ်။ ဘာသာတရားကတော့ ကိုယ့်သဘော။ စာဖတ်ပါ။ ဧည့်ခန်းမှာ ဟင်းဆင်နတိုက်ဇာပုလင်းနဲ့ တစ်ရှူး ထားပါ။ ဧည့်သည်ကို ကမ်းပေးပါ။ ဧည့်သည်ပြန်တိုင်း သင့်တဲ့နေရာ ပစ္စည်းတွေကို သန့်ရှင်းပါ။ သန့်ရှင်းရေးစည်းမျဉ်းတွေကို တသက်လုံး လိုက်နာကြပါ။
‌Cleaning and Disinfection of Households ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် အိမ်တွင်းသန့်ရှင်းရေး
နေအိမ် ရုံး အလုပ်နေရာ မျက်နှာပြင်တွေကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းပေးမလဲ။ စားပွဲ ကုလားထိုင် ထိုင်ခုံ တခါးလက်ကိုင်နေရာ မီးခလုတ် ရေအိမ်သာ ပိုက်ခေါင်း လက်ဆေးခွက် စတာတွေ။
၁။ သန့်ှရှင်းရေးလုပ်တဲ့သူ လက်အိတ်သုံးရမယ်။ နှာခေါင်းစည်းလိုမယ်။
၂။ သန့်ှရှင်းရေးလုပ်နေချိန်မှာ လေဝင်လေထွက် ကောင်းရမယ်။
၃။ သန့်ှရှင်းရေးလုပ်ရတဲ့ အကြိမ်ရေ နည်းအောင် မလိုအပ်တာတွေ အသုံးမပြုပါနဲ့။
၄။ နေမကောင်းနေသူနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ အနီးကပ် မနေပါနဲ့။ သီးခြားထားပေးပါ။ လူနာအတွက် သီးသန့် တစ်ရှူး လက်ဆေးရည် ဆပ်ပြာ စတာတွေ ထားပေးပါ။
၅။ အိမ်ရှိလူကုန် စည်းကမ်းလိုက်နာပါ။ ရုံး အလုပ်နေရာရှိ လူကုန် စည်းကမ်းလိုက်နာပါ။
• လက်အိတ်သုံးပါ။ တခါသုံးတစုံ။ ပြန်သုံးလို့ရတာဆိုရင် အဲလိုအလုပ်အတွက် သီးသန့်သတ်မှတ်ထားပါ။
• လက်အိတ်ချွတ်ပြီး ချက်ချင်းလက်ဆေးပါ။
• မျက်နှာပြင်က ညစ်ပေနေရင် ဆပ်ပြာသုံးပြီး အရင်ဆေးပါ။ ပြီးမှ ပိုးသေဆေးသုံးပါ။
• ပိုးသေဆေးမှာ အယ်လ်ကိုဟော ၇၀% ပါတာကောင်းတယ်။
• ချွတ်ဆေး ခေါ် ကလိုရင်းပါ ဘလိချ်ကို ရေရောသုံးနိုင်တယ်။ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နေ့စွဲစစ်ပါ။
• အဲဒီဆေးကို အမိုးနီးယားပါတာနဲ့ မရောပါနဲ့။ တခြားသန့်ရှင်းဆေးရည်တွေနဲ့လည်း မရောပါနဲ့။
Bleach ဘလိချ်ကို ရေရောနည်း
၁။5tablespoons (1/3rd cup) bleach per gallon of water လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၅ ဇွန်း + ရေတဂါလံ သို့မဟုတ်
၂။4teaspoons bleach per quart of water လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ ဇွန်း + ရေတကွာတ။
Hand hygiene လက်သန့်ရှင်းရေး
လက်ကို ရေးနဲ့ ဆပ်ပြာသုံးပြီး စက္ကန့် ၂၀ ကြာဆေးပါ။ ဆပ်ပြာသုံးချိန်မရှိရင် မလိုလောက်ရင် အယ်လ်ကိုဟော ၆၀% ပါ hand sanitizer လက်ဆေးရည်သုံးပါ။ လက်ကညစ်ပေနေတာကို မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာတိုင်းကိုတော့ ဆပ်ပြာနဲ့သာ ဆေးပါ။
• သန့်စင်ခန်းက ထွက်လာတိုင်း
• အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို ကိုင်ပြီးတိုင်း
• လူနာ သို့မဟုတ် ကလေးငယ်ကို ပြုစု လုပ်ကိုင်ပေးပြီးတိုင်း
• မဆေးရသေးတဲ့လက်နဲ့ မျက်နှာ ပါးစပ် မျက်စိ နှာခေါင်းနေရာတွေကို ထိကိုင်တာ မလုပ်ပါနဲ့။
Disinfectants to Control the COVID-19 Virus ပိုးသေဆေး
ပိုးသေဆေးစိုထိုင်းနေချိန်မှာသာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စတဲ့ပိုးတွေ ကင်းရှင်းနေပါမယ်။ Surface wipes ဝိုက်အစ ထပ်သုံးလိုက်ရင် ခြောက်တာ မြန်စေမယ်။ စိုနေချိန်ကြာပါစေ။
• ကော်ဇောတို့လို အရာတွေကို သီခြား သန့်ပေးရမယ်။
• လျှော်လို့ရတာတွေကို အဝတ်လျှော်စက်မှာ လျှော်ပါ။
• အဲတာတွေလုပ်တိုင်း လက်အိတ်သုံးပါ။ လက်ဆေးပါ။
• ညစ်ပေနေတာတွေကို လေထဲမှာ မခါပါနဲ့။
• အခန်းအနံ့အသက် စူးရှနေတာ မကောင်း။
• ပြူတင်းပေါက်တွေ သင့်တဲ့အချိန်မှာ ဖွင့်ပါ။
• ပန်ကာ လိုတဲ့အချိန်မှာ ဖွင့်ပါ။
• ကလေးတွေကို ပိုးသေဆေးပါတာတွေ မထိကိုင်ပါစေနဲ့။
• လက်ဆေးရန် disinfectant wipes နဲ့ baby wipes တွေမသုံးပါနဲ့။
• အမှိုက်ပုံး စနစ်တကျစွန့်ပါ။ အမြဲဖုံးထားပါ။ ကိုင်ပြီး လက်ဆေးပါ။
• အိမ်ကို လူဝင်လူထွက် နည်းပါစေ။
Unknown July 14, 2021 at 7:18 AM